ဆရာတန်ကီး၏ အမှောင်တွင်းမှဘုန်းကျက်သရေအလင်းဆီတို့ From Darkness to Glorious Light
by Lim Min (Singapore)
၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ဝေသော စင်ကာပူမှစာရေးဆရာမ Lim Min ပြုစုသော ဆရာတန်ကီးအထုပ္ပတိဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာမျက်နှာ ၂၀၂ ရှိပြီး၊ ရောင်စုံဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ၁၄ရွက်အပါအ၀င် အဖြူအမဲ၊ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများစွာပါရှိသည်။ ဆရာတန်ကီး ၂၀၀၆တွင် စင်ကာပူရောက်ရှိချိန် ဆရာမလင်မင်း နှင့်တွေ့ဆုံပြီး၊ များစွာစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ချင်းပြည်နယ်သို့တိုင်အောင် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးနောက် ဆရာတန်ကီးနှင့် ချင်းပြည်နယ် ယုံကြည်သူများ၏ မစ်ရှင်အကြောင်းကို ကမ္ဘာသို့ဖေါ်ပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်မှထွက်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ အခေါက်ခေါက်အခါ သွားရောက်ခြင်း၊ ဆရာတန်ကီးနှင့်အကြိမ်များစွာ အင်တာဗျူးခြင်း၊ အခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများစွာပြုလုပ်ပြီးမှ ယခုစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
အမှာစာရေးပေးသူများမှာ ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်း (Rev. Dr ညီအစ်ကိုအသင်းတော်၊ရန်ကုန်)၊ Dam Suan Mung (Rev. Dr, Full Gospel ရန်ကုန်), John Maust (Media Associates International , USA), Ramom Rocha III (OMF International, Philippines), Paul R Woods (Rev. Dr, Singapore Bible College), Hakan Gabrielsson (Rev, Touching Asia - Sweden), L. John (rev, Assemblies of God, ရန်ကုန်), Khai Khan Suan (Rev, Chin State, မြန်မာ), Stephen Chua (Rev, Full Gospel Centre, Singapore), Andrew Yeo (Rev, Grace Methodist Church, Singapore), Cho Kee Thang (Rev, Assembly of God, Chin State မြန်မာ) တို့ဖြစ်ကြသည်။
တန်ကီး (၁၉၅၃ မွေးဖွား) စာအုပ်၊ အခန်းပေါင်း ၈ခု ရှိသည်။
အခန်း(၁)တွင် မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်ကို ရေးထားသည်။ သေပြီဟုယူဆထားသော အသက်၂၀အရွယ် တန်ကီးကို သဂြိုလ်ရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်၊ တန်ကီး၏ ၀ိညာဉ်သည် ကောင်းကင်ဘုံ သို့ လှေခါးဖြင့်တက်ကာ ရောက်ရှိသွားပြီး၊ အံသြ၊မိန်းမောဘွယ်များကို မြင်တွေ့ရခြင်း၊ မိမိကို လူပြည်သို့ပြန်ပြီး၊ အမှုဆောင်စရာများ လုပ်ရန်ရှိသည်ဆိုကာ ပြန်လာစေခြင်းဖြင့် ရက်ပေါင်းများစွာမျောနေရာမှ အသက်ပြန်ဝင်လာခြင်း၊ နတ်ကိုးကွယ်သော မိမိရွာတွင် အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်နှင့် ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်း ရွာသားများကို ဝေငှပြောဆိုခြင်း စတင်ခဲ့ပါသည်။
Machung (မင်းတပ်မြို့အနီးမှ ရွာကလေးတရွာ)
တန်ကီး၏ မိဘများ၊ ပညာ ၇တန်းမျှသာ သင်ခဲ့ရခြင်း၊ အသက်၂၀အရွယ်တွင် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ သေရာမှ ပြန်ရှင်လာပြီး ရူပါရုံအိပ်မက်မှ ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်း ပြောရင်း နတ်ကိုးကွယ်သောမိရိုးဖလာ ဆွေမျိုး၊ ရွာသားများမှ အပယ်ခံဘ၀သို့ ၈နှစ်ကြာ၊ ပင်ပမ်းဆင်းရဲစွာဖြင့် နေခဲ့ရခြင်း၊ အနီးနားမှ ဆရာ Pa Za Mung (Ro Baptist Church) အားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာကို သိရခြင်း၊ မင်းတပ်မြို့မှာ ဆရာ Cieh Ceu (Rev) အားဖြင့် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ခြင်းခံခဲ့ခြင်း၊ ၈နှစ်ကြာမှ ရန်ကုန်မှအလယ်ရောက်လာသူမိတ်ဆွေထံမှ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကို မြင်ရပြီး၊ ၃ကြိမ်တိုင် အသနားခံ၊တောင်းပန်ပြီး ရယုခဲ့ရသည်။ ထိုမတိုင်မှီက ဆရာ Pa Za Mung သင်ပေးသော ဓမ္မသီချင်း "Revive Thy Work O Lord" သီချင်းဖြင့်သာ ဆုတောင်း၊ သီဆို၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့ရပါသည်။
အနီးအနားရွာများကို ဧ၀ံဂေလိဟောကြားရန် လော်စပီကာဝယ်ထားပြီး၊ ဘက်ထရီအားသွင်းရန် ၃၆မိုင်ဝေးသော မင်းတပ်မြို့သို့ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်၊ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရသည်။ ၁၀နာရီခန့် တောတောင်ဖြတ်ကျော်၊ လမ်းလျှောက်ရသော ခရီးစဉ်မျာ ထိုဒေသခံများ၏ ၁၉၈၀ လောက်က သာမန်ခရီးစဉ်တခုဖြစ်ပါသည်။
ဆွေမျိုးများမှာ နတ်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ပြီး၊ တန်ကီးအား မိရိုးဖလာ နတ်ဆရာလုပ်ရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဇနီးသည်ကို လက်ထပ်စဉ်က လျှော်ကြေးငွေများစွာ ၃နှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်ပေးဆပ်ခဲ့ရသည့်ငွေကို တ၀က်ပြန်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းခံခဲရသည်။ သေနပ်ဖြင့် တန်ကီးဥိးခေါင်းကို ချိန်ပြီး သေနပ်မောင်းခလုပ်ဆွဲသောအခါ တန်ကီးက ပြန်မခုခံပဲ ယေရှုနာမဖြင့်ကျည်မထွက်ရန် ရဲဝံစွာပြောခဲ့သည်။ ၂ကြိမ်တိုင် ပစ်ရ ကျည်မထွက်သဖြင့် ထိုရွာလူကြီးသည် ဒေါသဖြင့် မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ရာမှ သေနပ်သံကြီးထွက်လာခဲ့သည်။ ဘေးလူများက ထိုလူကြီးကို ၀ိုင်းဝန်းဆွဲတားလိုက်ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်၊ ရိုက်နှက်၊ ထိုးကြိတ်ခံရသော်လည်း ပြန်မတုန့်ပြန်ပဲ ယေရှုနာမဖြင့် ခံနိုင်ခဲ့သည်။ လယ်လုပ်ရန် မည်သူမျှမလုပ်ကိုင်သည့် မြေကွက်ကို ပေးပြီးလုပ်စေသော်လည်း နှစ်စဉ်လုံလောက်သော ဆန်စပါး၊ စိုက်ပျိုးရရှိခဲ့သည်။
အသက်သေသွားသူ ၃ဦးအဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားထားပါသည်။ လူငယ်တစ်ဥိး သေဆုံးသွားပြီ သတ်မှတ်သည်ကို နာရီပေါင်းများစွာ မျက်ရည်ကျ၊ ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် အသက်ပြန်ရှုလာပြိး၊ ရှင်လာသည်။ ထိုအဖြစ်ကို ရွာသားများတွေ့ရှိပြီး ယုံကြည်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အခြားအဖြစ်ပျက်တခုမှာ မိမိကလေးသေဆုံးခြင်းမှာ တန်ကီးကိုးကွယ်သောဘုရားကြောင့်ဖြစ်သည်စွတ်စွဲသူ ရွာလူကြီးဖခင်တဦးဖြစ်သည်။ သူ့သားငယ် အသက်ပြန်မရှင်လျှင် အားလုံးကို ပစ်သတ်မည်ဟု သေနပ်ဖြင့်ချိန်းခြောက်သူ ထိုရွာလူကြီးရှေ့တွင်၊ တန်ကီးနှင့် ယုံကြည်သူများ နာရီများစွာ မျက်ရည်ဖြင့် အပြင်းအထန်ဆုတောင်းပေးခဲ့ရသည်။ ဆုတောင်းသူများမှ တဥိးက မျက်ရည်ဖြင့် ကလေးငယ်အသက်ပြန်မရှင်လျှင် တန်ကီးတဦးတည်းသာမက မိမိတို့လည်း ပစ်သတ်ခံရတော့မည်ဟု ၀မ်းနည်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ၂နာရီဆက်လက် ယုံကြည်ခြင်းကြီးစွာဖြင့် ဆုတောင်းပြီး အာမင် ဟု အဆုံးသတ်ချိန်တွင် ကလေးငယ် မျက်စိပြန်ဖွင့်လာသည်ကို အံ့သြဖွယ်တွေ့ရသည်။ သွေးစိမ်းရှင်ထွက်ပြီး၊ လူသူဝေးရာ နေထိုင်ရသည့် အနူရောဂါသည်တဦးလည်း ရောဂါပျောက်ကင်းသွားကြောင်း လပိုင်းအတွင်း တွေ့ရသည်။ ထိုအံ့သြဘွယ်ဖြစ်ရပ်များမှ ပြန်လည်အသက်ရှင်၊ အနူရောဂါပျောက်သူများမှာ ယုံကြည်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲရုံမက၊ ဓမ္မအမှုဆောင်များအဖြစ် ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ်၂၀၀၀ က သခင်ယေရှု၏ သေရာမှပြန်ရှင်ခြင်း၊ အနူရောဂါပျောက်စေခြင်း စသည့် အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းများသည် ယခုအချိန်အထိ မှန်ကန်၊လျှက်ရှိပါသည်။
၁၉၈၅တွင် ရွာအတွက် လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာဝယ်မှဖြစ်မည် ငွေစုဆောင်းရာ အသင်းသားများက နားကပ်ရောင်း၊ မြေရောင်းပြီး ကျပ်ငွေတစ်သောင်းရခဲ့သည်။ ၆၃၀မိုင်ဝေးသော ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀ရက်ခရီးထွက်လာခဲ့ရာ လမ်းတ၀က်၊ ပုခုက္ကူမြို့ရောက်စဉ် မြန်မာအစိုးရမှ ၇၅ကျပ်တန်များ တရားမ၀င်ကျေငြာခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး၊ ၇၅ကျပ်တန်ချည်း လက်ဝယ်ရှိသော ဆရာတန်ကီး ၀မ်းနည်း၊မျက်ရည်ကျ ဆုတောင်းခဲ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာနှင့်အတူ မိမိရွာသို့ပြန်ရန် ဘုရားခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ရန်ကုန်သို့ ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင် ဆရာဦးတင်မောင်ထွန်းထံ ၀င်ရောက်၊ပြောပြရမှာ ငွေကြေးထုတ်ပေးပြီး၊ ဈေးပိုသက်သာသည့် ထိုင်းနယ်စပ်သို့ သွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်တွင် တွေ့ရသော မြန်မာစစ်ဗိုလ်မှုးတစ်ဦးမှ၊ စစ်တပ်ဂျစ်ကားဖြင့် ဆရာတန်ကီးကို သွားမည့်နေရာများကို လိုလေးသေးမရှိ၊ ကူညီပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ (Note: ထိုဗိုလ်မှုး Khup Chin Pau မှာ ယခုအခါ စင်ကာပူယုဒသန်အသင်းတော်တွင် စီနီယာသင်းအုပ်ဖြစ်သည်။) မြန်မာပြည်တွင်လည်း ၁၈နှစ်အရွယ် ၅နှစ်ကြာပြီးဖြစ်သော သွေးမတိတ်ရောဂါဖြင့် နှုတ်ခမ်းမှပင်သွေးကျနေသူ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ဖခင် Dr Howard Chin Khen Mang မှတဆင့် သိကျွမ်းခဲ့ရသည်။ ရောဂါပျောက်လျှင် ဘုရားအမှုဆောင်အဖြစ် ဆပ်ကပ်မည်ဟု မိန်းကလေးက ပြောပါသည်။ ဆရာတန်ကီးလည်း အစာရှောင်းဆုတောင်းရင်း ထိုမိန်းကလေး အနာရောဂါငြိမ်းမည်ဟု နိမိတ်ကိုမြင်ရသည်။ နောက်တပတ်သွားရောက်တွေ့ဆုံရာ ပိုမိုသက်လာလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ နောင် ၁၃နှစ်ကြာ ၁၉၉၇တွင် ဆရာတန်ကီး စင်ကာပူသို့ရောက်စဉ် ထိုမိန်းကလေးသည် ELIM Church, Singapore မှ ဓမ္မဆရာမအက်စတာ Pastor Esther အဖြစ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။
ချင်းပြည်နယ်၊ ကျေးရွာများ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း မြို့ရွာများသို့ ဧ၀ံဂေလိခရီး တစ်ဦတည်း လပေါင်းများစွာ ထွက်ခဲ့သည်။ လက်ခံသည့်နေရာများတွင် အဆင်ပြေသော်လည်း လက်မခံသောမြို့ရွာများတွင် ဇရပ်တွင်နေထိုင်းရသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဆရာတန်ကီးသည် မင်းတပ်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး၊ အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင် ဆရာတန်ကီး ကျမ်းစာသင်တန်းအားဖြင့် ဓမ္မဆရာများစွာသည် အသင်းတော်ပေါင်း ၆၀ခန့် တိုးပွား၊ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံရောက် အသင်းသားများဖြင့် မလေးရှား၊ မြန်မာအသင်းတော် ၂ခုသို့ပင် ဆရာတန်ကီး ရောက်ရှိဝေငှခဲ့ရသည်။
Machung ရွာတွင် မိမိတို့ K'cho ဘာသာစကားဖြင့် ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ရရှိရန် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ တန်ကီး .. မင်းပဲဘာသာပြန်ပြီး၊ ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ထုတ်ပါ .. ဟု အသံကြားခဲ့သည်။ မြန်မာဘာသာမှ K'cho ဘာသာသို့ ဓမ္မသီချင်း ၁၇၇ပုဒ်ကို တလအတွင်း ဘာသာပြန်နိုင်ခဲ့သည်။ စာအုပ်ထုတ်ရန် အုပ်ရေတစ်ထောင်ကို ကျပ်တစ်သောင်းကုန်ကျမည်။ ငွေလုံးဝမရှိသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မိုင်၆၃၀ဝေးသော ရန်ကုန်သို့ ခရီးထွက်ခဲ့ပြန်သည်။ မိတ်ဆွေ ဓမ္မဆရာ Lawng Thang မှ သူ၏အသင်းတော်တွင် ဝေငှပြောကြားခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအသင်းတော်မိတ်ဆွေများဖြင့် သီချင်းစာအုပ်ကို လက်နှိပ်စက်ရိုက်နှိပ်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ဓမ္မသီချင်းစာအုပ် ထုတ်လုပ်၊ရောင်းချပြီး ငွေပြန်ရမှ ပေးပါပြောဆို စာအုပ်ထုတ်ဝေသူတဦးက ချေးငှားပေးမည်ငွေကိုလည်း ၀မ်းနည်းစွာဖြင့်လက်မခံခဲ့ပါ။ ဆရာတန်ကီးသည် ထိုဓမ္မသီချင်းကို ဓမ္မဒါန အခမဲ့ဝေငှမည်ဖြစ်သောကြောင့် ငွေပြန်ရရန် မဖြစ်နိုင်၍ လက်မခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိမိဓမ္မဆရာဟု သိသောယုံကြည်သူတဦးက ဓမ္မသီချင်းထုတ်ရန်ကိုပင် လုံးဝမသိပဲ ဆရာငွေလိုနေသည်ကို ရူပါရုံရသောကြောင့် ငါးထောင်ကျပ် ၂ကြိမ်၊ ပေးလှုခြင်းဖြင့် ကျပ်တစ်သောင်းရရှိခဲ့သည်။ K'cho ဘာသာစကားဖြင့် ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ရေ တစ်ထောင် ထုတ်နိုင်ပြီး၊ အခမဲ့ ဝေငှနိုင်ခဲ့သည်။
မိမိအထုတ်ပတ္တိထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် သက်သေခံစာအုပ်ငယ်အားဖြင့် လူအများထံ၊ ဧ၀ံဂေလိတရားဝေငှရန် ရူပါရုံရရှိခဲ့သည်။ မန္တလေးဓမ္မတက္ကသိုလ်မှ ဆရာမ၂ဦးမှ စာမူကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ မုဆိုးမ၂ဦး ပံ့ပိုးမှုငွေဖြင့် အုပ်ရေ တစ်သောင်း ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးသို့ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။ အမှာစာများ ထပ်မံရောက်ရှိလာသဖြင့် နောက်ထပ် အုပ်ရေ ၂သောင်း ထပ်မံရိုက်နှိပ်ရာတွင်လည်း ပံ့ပိုးကူညီသူအားဖြင့် ဓမ္မဒါန အခမဲ့ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ မင်းတပ်မြို့တွင် ဆရာတန်ကီး၏ BLESSING ASSEMBLY OF GOD အသင်းတော်ရှိသည်။ ဟာလေလုယ ကျမ်းစာကျောင်းလည်း ရှိသည်။ သူ၏ အသင်းသားများမှာ ယခုအခါ ကမ္ဘာအနှံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဆရာတန်ကီး စင်ကာပူပထမအကြိမ်း ၂၀၀၆တွင် ရောက်ခဲ့သည်။ တကြိမ် ထပ်မံရောက်စဉ် ၂၀၁၁ လစ်တဲမြန်မာအသင်းတော်မှ ဆရာခင်က ဖိတ်ခေါ် တရားဟောစေခဲ့သည်။ စာရေးဆရာမ Lim Min ကိုယ်တိုင် လာရောက်ပြိး သူရေးသောစာအုပ်ကို လက်မှတ်ထိုး၊ ရောင်းချပေးစဉ် မုရန်မှ စာအုပ်ဝယ်ယူ၊ ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။
It is my great joy and honour to endorse this book, from Darkness to Glorious Light, as the amazing true life experiences ofasimple man, Rev Tam Ki, whom God called to be His servant-prophet from an obsure sub-tribe of the K'cho of the Chin people of Myanmar. He is one of many in Myanmar whom I was privileged to disciple and whom I know well. So I am happy to testify that all the accounts shared in this book are true and correct to the best of my knowledge.
It is my hope and prayer that whoever reads this book will be helped by the Holy Spirit and will be edified. Because even Christian workers nowadays are skeptical when it comes to God's word being manifested through miracles in this age, may I therefore call to mind that the truth of His miracles is not limited to the times of the early church, but is still very much the same for us today who believe that Jesus Christ is the same "yesterday, today and forever". Brother Tam Ki's life and testament isaliving witness of this truth manifested by signs and wonders and glorifying god in our midst. This is what this book is all about. Yes! The Lord certainly has been with Rev Tam Ki and He will certainly be with you if you care to trust Him. Amen!
Rev Dr Tin Maung Tun
D.D., Senior Elder Pastor, Hebron Brethren Assembly, Yangon
President & CEO, Witnessing for Christ, Yangon
President, Myanmar Far East Broadcast Radio Ministry
Author Lim Min does the global churchagreat service by sharing the compelling story of Rev Tam Ki of Myanmar. Delivered miraculously from death and called to preach Christ inahostile culture rooted in spirit worship, Tam Ki helped leadaspiritual revival among the K'cho people and beyond. Through exhaustive research and conversations with Tam Ki, plus in-depth interviews with more than 30 people who know his remarkable ministry, biographer Lim Min introduces the reader to the many stark battles of spiritual warfare that characterized Tam Ki's remarkable ministry, and the demonstrate time and again that greater is He who is in us than he who is in the world. In so doing, Tam Ki isaliving answer to his prayer for this book: "May the faith of many increase after reading this record of Your wonderful works so that they will step forward in confidence to serve you."
I was praising God while reading From Darkness to Glorious Light, the gripping testimonny of Myanmar''s Rev Tam Ki, superbly written by author Lim Min. Tam Ki's extraordinary life and ministry will leave the reader worshiping the God of Heaven and Earth who, in His sovereignty, would draw people to Himself by the awesome display of His power over the forces of darkness. These amazing accounts of modern day 'signs and wonder's reminded me of Col. 2:15, 'In this way, He (Christ) disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross' -NLT. May the Lord Jesus Christ be honored and glorified, and many more souls ushered into his Kingdom, through this hard-to-put-down book.
International Literature Development Coordinator
Tam Ki's story describes the chilling realities of spiritual bondage in the lives of men and women. But its true value is asaheartwarming account of the faithfulness and concern of the Living God for His people.
Tam Ki's journey of faith and service reminds us over and over again of God's desire for people to know Him and achieve wholeness of body, mind and spirit asaresult.
This book wonderfully combines the big picture of church growth among the Chin with details of God's miraculous acts in the lives of individuals. Acts 29 in Asia!
Rev Dr Paul R Woods
Heade of Intercultural Studies, School of Theology English
Rev Tam Ki's life and ministry is trulyaremarkable story ofatribal man''s supernatural encounter with God and his pursuit of the call given to him. He has not deviated from that mission but has faithfully and with integrity walked with God for many years. He has becomeawel-known minister in Myanmar enjoying great respect from many denominations and church movements.
I am well acquainted with him and his ministry after knowing himanumber of years, and it has beenagreat pleasure to read this inspiring book ofareal-life account ofatrue servant of God.
Rev Hakan Gabrielsson
Founder and Director , Touching Asia
Rev L John
General Superitendent, General Council
Rev Khai Khan Suan
Superitendent (District Council 7) of Assemblies of God Churches
Tedim, Northern Chin State, Myanmar
Rev Stephen Chua
Senior Pastor, Charis Full Gospel Centre
Rev Andrew Yeo
Local Preacher, Grace Methodist Church
Rev Cho Kee Thang
Senior Pastor, Blessing Assembly of God Church
Mindar, Southern Chin State, Myanmar
Built according to the blueprints Tam Ki received from God
Blessing Assembly of God Church, Mindat, 2008
Cho Kee Thang (forth from left) and Tam Ki (fifth from left) with Church deacons
Mindat, with Blessing Assembly of God Church in the centre, 2008
(Left to right) Tam Ki, Lim Min and Thang Shwe outside the Blessing Assembly of Church , 2008
Map of Myanmar (Burma), Map of Chin State, Mindat Town, Machung Village